Duulimaadyada New London ee ka imanaya New York, Denver, San Francisco iyo Boston ee United Airlines
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada New London ee ka imanaya New York, Denver, San Francisco iyo Boston ee United Airlines
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka Mareykanka
Duulimaadyada New London ee ka imanaya New York, Denver, San Francisco iyo Boston ee United Airlines.
London waxay ahayd meesha ugu badan ee loo ballansan yahay macaamiisha ganacsiga United bishii Oktoobar, shirkaddu waxay filaysaa in isbeddelkani uu sii socdo illaa 2022.
United Airlines ayaa ku dhawaaqday shan duulimaad oo cusub oo afar magaalo oo Mareykanka ah ku wajahan Gegida Diyaaradaha ee Heathrow ee London.
United Airlines si ay u bixiso 22 duulimaad maalintiiba London, United Kingdom guga 2022.
Marka adeegu bilaabmo, United waxa ay bixin doontaa duulimaadyo badan oo u dhexeeya Magaalooyinka New York iyo London marka loo eego sidayaal kasta oo Maraykan ah.
United Airlines Maanta ayaa lagu dhawaaqay in ay ku kordhinayso shan duulimaad oo cusub London Madaarka Heathrow, oo ay ku jiraan laba duulimaad oo kale oo ka yimid New York/Newark, safarro dheeraad ah oo ka yimid Denver iyo San Francisco, iyo sidoo kale duulimaad toos ah oo cusub oo ka yimid Boston. Adeegga cusub waxa uu bilaabmayaa bisha Maarj 2022 marka lagu daro, United waxa ay noqon doontaa sidaha kaliya ee Maraykan ah ee bixiya adeega aan joogsiga lahayn ee u dhexeeya todobada suuq ee ganacsi ee dalka iyo London. United waxay bixin doontaa 22 duullimaad maalintiiba Maraykanka ilaa London, iyo duullimaadyo badan oo u dhexeeya magaalooyinka New York iyo London marka loo eego kuwa kale ee Maraykanka ah. London waxay ahayd meesha ugu badan ee loo ballansan yahay macaamiisha ganacsiga United bishii Oktoobar, shirkaddu waxay filaysaa in isbeddelkani uu sii socdo illaa 2022.
"Ku dhawaad ​​​​30 sano, United waxay bixisay xiriir muhiim ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo London, ilaalinta adeegga inta lagu jiro masiibada oo si istiraatiiji ah u koraysa jadwalkayaga si aan ugu ilaalinno macaamiisheena xarumaha ganacsiga caalamiga ah ee muhiimka ah," ayuu yiri Patrick Quayle, madaxweyne ku xigeenka sare ee caalamiga ah. shabakada iyo xulafada at United Airlines. "London waa qayb muhiim ah oo ka mid ah shabakadaha United, waxaanan ku kalsoonahay in dalabka uu sii socon doono, gaar ahaan marka socdaalka ganacsiga caalamiga ah uu soo laabto 2022."
Duulimaadyadan cusub ayaa ku dhismaya kuwa ugu weyn United-waligaa trans-Balaadhinta Atlantic lagu dhawaaqay horraantii bishan. United waxay hadda ku shaqeysaa wadar ahaan todoba duulimaad Heathrow Laga bilaabo US: laba duulimaad maalinle ah oo ka yimaada New York/Newark iyo Washington DC, iyo hal duulimaad maalinle ah oo ka yimaada Chicago, Houston, iyo San Francisco. Bisha Diisambar, adeeggu wuxuu kordhin doonaa 10 duulimaad maalinle ah, iyadoo duullimaadyo dheeraad ah ay ka imaanayaan New York/Newark iyo Chicago, kaliya waqtiga fasaxyada jiilaalka.
Shanta duullimaad ee cusub waxay ka dhigi doonaan ku boodboodka balliga mid sahlan oo raaxo leh labadaba safarrada firaaqada iyo ganacsiga, sida United Airlines waxay:
Ku bilow duulimaadyo cusub oo maalinle ah oo ka yimaada Boston oo ay ku shaqeeyaan Boeing 767300ER ee United, kaas oo leh 46 kursi ganacsi oo United Polaris ah iyo 22 United Premium Plus® kuraas dhaqaale oo qaali ah.
Dib u bilaw duulimaadyada maalinlaha ah ee Denver kuna dar duulimaad labaad oo maalinle ah oo ay maamusho Boeing 787-9.
Ku dar lix iyo toddobaad duulimaadyo maalinle ah oo ka imanaya New York/Newark, mid kasta oo ka mid ah waxaa ku shaqayn doona Boeing 767-300ER ee United oo u oggolow adeeg saacadle ah fiidkii.
Ku dar duullimaad saddexaad oo maalinle ah oo ka imanaya San Francisco oo ay maamusho Boeing 787-9.
Ka bilow adeeg maalmeed ilaa London kana soo Los Angeles.